Maraykanka, 02 March 2019
Sabti 2 March 2019
Kulankii Trump iyo Kim oo dhammaaday heshiis la'aan
Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump ayaa sheegay in kulan madaxeedkii uu la lahaa hoggaamiyaha Korea-da Waqooyi uu maanta soo dhammaaday, ayada oo aan wax heshiis ah ah lagu gaarin.
Wareysi: Maalinta Muslimiinta Minnesota ee Baarlamaanka
Gollaha Shacabka ee gobolka Minnesoya ayaa waxa lagu qabtey kulanki 16-naad ee maalin loogu magacdarey, maalinta Muslimiinta Minnesota ee Baarlamaanka.
Shir-madaxeedkii Hanoi oo Maanta ku Eg.
Waxaa maanta ku eg shir madaxeedkii labada hogaamiye ee Maraykanka iyo K. Wqooyi D. Trump iyo Kim Jong Un. Wararka laga helayo magaalada Hanoi ee dalka Vietnam oo ah halka uu shir-madaxeedku ka socdo ayaa sheegaya in wali aan horumar weyn laga gaarin.
Cohen oo ka warbixiyey madaxweyne Trump
Qareenkii hore ee madaxweyne Donald Trump, Michael Cohen ayaa maanta guddiga ka tirsan Aqalka Wakiilada u sheegay in madaxweynaha uu yahay “cunsuri, beenlow iyo qaa’in”
Trump iyo Kim oo ku kulmay Hanoi
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Korea-da Waqooyi Kim Jong Un ayaa kulan madaxeedkoodii labaad ka furay magaalada Hanoi ee dalka Vietnam.
Trump iyo Kim oo Kulmaya
Magaalada Hanoi ee xarunta dalka Vietnam oo ah goobta uu shirku ka dhacayo waxaa la is leeyahay Kim Jong Un ha arko sida ay barwaaqo u noqotay, iyada oo dalkaasi ay horay cadaawad uga dhaxaysay dalka Maryakanka
Trump iyo Kim oo ku kulmaya Vietnam
Hoggaamiyaha Korea-da Waqooyi, Kim Jong Un ayaa maanta tegay magaalada Hanoi ee dalka Vietnam, ka hor kulan madaxeedka labaad ee uu la yeelanayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Taliban oo rajo ka muujisay wada-hadallada Mareykanka
Kooxda Taliban ayaa sheegtay inay rajeeneyso “natiijo cad oo miro-dhal ah” oo kasoo baxa wada-xaajoodyo ay la leeyihiin saraakiisha Mareykanka oo maanta ka billowday magaalada Doha ee dalka Qatar.